Shabakadda Amiirnuur – Page 80
Xukun Xaddu Rajmi ah Oo ka dhacay Shabeellaha hoose.
Fagaare ku yaalla degmada Sablaale ee Wilaayada shabeelaha hoose ayaa maanta barqadii waxaa ka dhacay xukun rajmi ah oo lagu fuliyay haweenay Lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Warsame. Xukunka Rajmiga ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa boqolaal dadweynaha degmada kamid ah. Shukri Cabdullaahi oo 30 jir ahayd ayaa guursatay 11 nin, […]
Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha hoose, Sheekh Muxamad (Abuu Usaama) oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, ayaa waxa uu ka waramay xaaladda guud ee gobolka iyo arrimo kale oo muhim ah. Ugu horreyn waxa uu sheegay in guud ahaan gobolka uu si wcan uga da’ay […]
Degdeg: Weerar Khasaare Sababay oo Ciidamada Kenya Loogu Geystay Duleedka Mandheera.
Wararka ka imanaya dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumeysato ayaa waxay sheegayaan in maanta mar kale ciidamo Kenyaati ah la weeraray kuwaasoo loo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Weerarkan oo ahaa qarax ayaa saakay ka dhacay nawaaxiga deegaanka Dabaasiti oo hoostaga Mandheeea, waxaana lala beegsaday gaari […]
Daawo Sawirro: Kenya Oo Qiratay in Ku Dhawaad 10 Askari Looga Dilay Qaraxii Dhoobleey.
Faagfaahin ayaa kasoo baxaysa khasaarihii ka dhashay weerar qarax ah oo maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda Kenya lagula beegsaday gobolka Jubada hoose, meel u dhow xuduud beenaadka. Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 7 askari looga dilay qarax aad u xooggan oo ka dhacay meel ku dhow deegaanka […]
Kudhawaad 20 Askari Kenyan Oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Qarax ka dhacay Xuduud beenaatka.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbooyinka ayaa sheegaya in qarax culus oo khasaare badan dhaliyay lala eegtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen ciidamo katirsna Kenyaatiga xooga ku jooga Soomaaliya. Gaari nooca xamuulka ah oo kasoo gudbey xudud beenaatka, ayaa isagoo kusoo dhow magaalada Dhoobley waxaa lala eegtay qarax miino oo […]
Lajnada Warfaafinta Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa baahisay tirakoobka howlgalladii Al-Mansuuriyah ee gugii hore Imaarada Islaamiga kaga dhawaaqday wadankaas, kaas oo beegsanayay Shisheeyaha kusoo duulay dalkaasi muslimka ah. Wadarta guud ee howlgalladu waxay gaarayaan 8030 howlgal, 50 kamid ahna waxaa camaliyaad Nafhurnimo oo ay fuliyeen rag katirsan Imaarada Islaamiga ee […]
Afar Kenyaati Ah oo Xalay Lagu Dilay Mandheera.
Wararka ka imanaya dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumeysato ayaa waxay sheegayaan in dad Kenyaan ah habeenkii xalay lagu dilay degaan hoos yimaada Mandheera, Weerarka oo ka dhacay degaanka Shimbir Faadumo oo ku yaalla Koonfurta Mnadera, ayay Kenyaanku tuhunsan yihiin iney ka dambeeyaan ciidamada milatariga ee Xarakada Al-Shabaab. Mid ka […]